कुन पूर्खालार्इ सहायताको आवश्यक्ता हुन्छ ?
निम्नलिखित तालिकामा आध्यात्मिक स्तरानुसार विश्वको जनसंख्याको वर्गीकरण गरेको छ । यो २०१३ मा विश्व मन अनि बुद्धिद्वारा प्राप्त जानकारीमा आधारित छ ।
वर्ष २०१३ मा विश्वको जनसंख्याको आध्यात्मिक स्तर
विश्वको जनसंख्याको प्रतिशत
१. ६ देखि २०१३ को सरकारी जनगणना द्वारा विश्वको जनसंख्या अनुमानतः ७.०८६ अरब छ
२. आध्यात्मिक स्तर ७०% अथवा त्यस भन्दा माथि सन्त हुन्छन्
कृपया पढ्नुहोस् : आध्यात्मिक स्तर के हो ?
जस्तो कि तपार्इ देख्न सक्नुहुन्छ कि आज विश्वमा ५०% भन्दा अधिक व्यक्तिको आध्यात्मिक स्तर २०-३०% छ । जसको आध्यात्मिक स्तर ३०% भन्दा अल्प हुन्छ, साधना को अभावको कारण उनको सात्त्विकता अथवा उनको आध्यात्मिक बल अत्यन्त अल्प हुन्छ । व्यक्तिको मृत्युपछि केवल उनको लिंग देह को आध्यात्मिक स्तर अथवा पवित्रता अर्थात सात्त्विकता नै केवल मायने हुन्छ । भूलोकमा जस्तै, स्थूल देह तथा अन्य संसारिक मुद्दाहरु जस्तै धन, प्रतिष्ठा, नोकरी, हामी कति राम्रोसँग जोडेका छौं यी सबैको आध्यात्मिक आयाम अथवा सूक्ष्म जगतमा कुनै सम्बन्ध हुँदैन ।
सूक्ष्मदेह जसको आध्यात्मिक स्तर २० – ३०% हुन्छ त्यो भारी हुन्छ जस्तै चित्रमा सबै भन्दा तल्लो गोलाआकारमा देखाएको छ । भारीपन प्रमुखरुपले पृथ्वीमा रहेको जीवनकालको अवगुण, अत्यधिक संसारिक जीजहरु सँग आसक्ति अनि साधनाको कमि जुन साधनाको ६ मूलभूत सिद्धान्त अनुरुप हुँदैन ।
आध्यात्मिक स्तरानुसार पूर्खाको लागि आवश्यक सहायता
अत्यधिक सहायताको आवश्यकता
मध्यम सहायताको आवश्यकता
सहायताको आवश्यकता हुँदैन
आध्यात्मिक भारीपनको कारण, सूक्ष्मदेह ब्रह्माण्डको उच्च लोकमा जान पाउँदैन त्यसैले तल्लो स्तरको सूक्ष्मलोकसम्म नै सीमित रहन्छ, जस्तै भुवर्लोक तथा पाताल लोक । यहाँ उनी आफ्नो पापकर्म अनुसार तीव्र कष्ट अनि दु:ख भोग्दछ । २०-३०% आध्यात्मिक स्तरमा व्यक्तिको पाप उनको पुण्य भन्दा अधिक हुन्छ । अत: उनी यी लोकमा अधिकतर कष्ट अनि दु:खको अनुभव गर्दछ । इसको साथै, अधिक शक्तिशाली अनिष्ट शक्ति (भूत, प्रेत, पिशाच इ.)) उनी माथि आक्रमण गरि वशमा लिन्छ । यस्तो पूर्खालार्इ आध्यात्मिक स्तरमा हाम्रो सहायताको अत्यधिक आवश्यकता हुन्छ । ती पूर्खालार्इ हामी आध्यत्मिक स्तरमा कुन प्रकारले सहायता गर्न सक्छौं, यो हामीले आगाडिको लेखमा बताएकाछौं ।
जुन पूर्खाको आध्यात्मिक स्तर ३०-५०% को बीचमा हुन्छ उनलार्इ हाम्रो सहायताको आवश्यकता कम हँदै जान्छ । जुन पूर्खाको आध्यात्मिक स्तर ५०% भन्दा अधिक हुन्छ उनलार्इ मृत्यु उपरांत आफ्नो सम्बन्धिसँग कुनै प्रकारको सहायताको आवश्यकता हुँदैन । यो पनि एउटा मुख्य कारण हो कि ५० % आध्यात्मिक स्तर प्राप्त गर्नु प्रमुख आध्यात्मिक उपलब्धि हो, अनि यसको लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ ।